ယနေ့အချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့နိမိတ်တွေ – Shwe Myanmar
ယနေ့အချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့နိမိတ်တွေ
ယနေ့ချိန်ထိ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တဘောင် ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ရှေးခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင်အဆက်ဆက်ကစပြီး လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ၌ အတိတ်၊ နိမိတ်၊ စနည်း၊ တဘောင် များကို မူတည်၍ ကြိုတင်ဖြစ်စဉ်များကို နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ် …
ရှေ့၌ လာလတ္တံ့သော အကြောင်းတရား၊ အကျိုးတရား အဖြစ်အပျက်တို့ ကို အကျဉ်းချုံးကာ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည့် တေးသီချင်းတို့ကို “တဘောင်”ဟု ခေါ်ဆိုရာ ယခုဖော်ပြမည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရှေးခေတ်နိမိတ်တဘောင်များ ဖြစ်ကြပါသည် … ကုန်း ဘောင် ခေတ် က တည်း က ပေါ် ခဲ့ တဲ့ နာ မည် ကျော် တဘောင် တစ် ခု ရဲ့ အ ဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆိုချက် တွေ ကတော့ . . .
(၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကို ဆင်း မည် – ဟံသာဝတီမွန် တို့ အင်းဝ ကို သိမ်းပိုက် လိမ့်မည်။ ဟင်္သာမှာ ဟံသာဝတီမွန်တို့၏ အမှတ်အသား ဖြစ်ပြီး အင်း ဆိုသည်မှာ အင်းဝကို ဆိုလိုပါသည် .. အင်းတို့၏ အဝမှာ ရှိလို့ အင်းဝ (InWa)၊ မြစ်တို့အင်းတို့ ၏ ဆုံရာ အဝမှာရှိလို့ အဝ ( AVA )၊ အင်းကိုး အင်းအလယ်မှာ ရှိလို့ အင်းနဝ (Innwa) စ သဖြင့် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည် …။
(၄) ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ် လိမ့်မည် – စနေနံတိုင်းတပါးမင်းအစိုးရကို ကြာသပတေးနံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကြာသာပတေးနံ အဖွဲ့အစည်းတို့က ဖြုတ် ချဖယ်ရှားပြီး လွတ်လပ်ရေး အရ ယူပေးလိမ့်မည် …။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ၊ ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်၊ မျိုးချစ် ဗမာ့တပ်မ တော်၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း.. အားလုံးဟာ ကြာသာပတေးနံများသာ ဖြစ်သည် ကို အံ့သြဖွယ် တွေ့ရလိမ့်မည် …။
(၅) သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့် မည် – တပ်မတော် မှာ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့သူများထဲမှ လေးယောက်မှာ နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တို့ ဖြစ်သည် …။
(၇) လက်ပံလည်း ရှား လိမ့်မည် – တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ပင် ယခု အတောအတွင်း တရုတ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် က ကျွန်းသစ်ထက် တောင် ကြိုက်လို့ အများဆုံးခိုးထုတ်ခံနေရသော တမလန်းသစ် မှာ လက်ပံမျိုးနွယ် ဟု သိရပါသည် …။
ယနခြေိ့နျထိ သှေးထှကျအောငျ မှနျလှနျးတဲ့ မွနျမာ့ နိမိတျတဘောငျ ဖှငျ့ဆိုခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ … ရှေးခတျေမွနျမာ့သမိုငျးတှငျ ဘုရငျအဆကျဆကျကစပွီး လောကုတ်တရာဆိုငျရာ ဆောငျရှကျခကျြမြား၌ အတိတျ၊ နိမိတျ၊ စနညျး၊ တဘောငျ မြားကို မူတညျ၍ ကွိုတငျဖွဈစဉျမြားကို နိမိတျဖတျခဲ့ကွပါတယျ …
ရှေ့၌ လာလတ်တံ့သော အကွောငျးတရား၊ အကြိုးတရား အဖွဈအပကျြတို့ ကို အကဉျြးခြုံးကာ သယျဆောငျလာခဲ့သညျ့ တေးသီခငျြးတို့ကို “တဘောငျ”ဟု ချေါဆိုရာ ယခုဖျောပွမညျ့ ထငျရှားကြျောကွားသော ရှေးခတျေနိမိတျတဘောငျမြား ဖွဈကွပါသညျ … ကုနျး ဘောငျ ခတျေ က တညျး က ပျေါ ခဲ့ တဲ့ နာ မညျ ကြျော တဘောငျ တဈ ခု ရဲ့ အ ဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ ဆိုခကျြ တှေ ကတော့ . . .
(၁) ဟင်ျသာမငျး အငျးကို ဆငျး မညျ – ဟံသာဝတီမှနျ တို့ အငျးဝ ကို သိမျးပိုကျ လိမျ့မညျ။ ဟင်ျသာမှာ ဟံသာဝတီမှနျတို့၏ အမှတျအသား ဖွဈပွီး အငျး ဆိုသညျမှာ အငျးဝကို ဆိုလိုပါသညျ .. အငျးတို့၏ အဝမှာ ရှိလို့ အငျးဝ (InWa)၊ မွဈတို့အငျးတို့ ၏ ဆုံရာ အဝမှာရှိလို့ အဝ ( AVA )၊ အငျးကိုး အငျးအလယျမှာ ရှိလို့ အငျးနဝ (Innwa) စ သဖွငျ့ ချေါဆိုခဲ့ကွသညျ …။
(၄) ထီးရိုးကို မိုးကွိုးပဈ လိမျ့မညျ – စနနေံတိုငျးတပါးမငျးအစိုးရကို ကွာသပတေးနံပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ကွာသာပတေးနံ အဖှဲ့အစညျးတို့က ဖွုတျ ခဖြယျရှားပွီး လှတျလပျရေး အရ ယူပေးလိမျ့မညျ …။ ဗမာ့လှတျလပျရေး တပျမတျော ၊ ဗမာ့ကာကှယျရေး တပျမတျော၊ မြိုးခဈြ ဗမာ့တပျမ တျော၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး.. အားလုံးဟာ ကွာသာပတေးနံမြားသာ ဖွဈသညျ ကို အံ့သွဖှယျ တှရေ့လိမျ့မညျ …။
(၇) လကျပံလညျး ရှား လိမျ့မညျ – တိုကျတိုကျ ဆိုငျဆိုငျပငျ ယခု အတောအတှငျး တရုတျ နဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျ က ကြှနျးသဈထကျ တောငျ ကွိုကျလို့ အမြားဆုံးခိုးထုတျခံနရေသော တမလနျးသဈ မှာ လကျပံမြိုးနှယျ ဟု သိရပါသညျ …။
Previous PostPrevious မ န္တ လေး မြို့ က လူ ထု လှုပ် ရှား မှု မှာ ကျ ဆုံး ခဲ့ ရ တဲ့ အာ ဇာ နည် သူ ရဲ ကောင်း တွေ အ တွက် တစ် ဦး ကို ငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ လှူ ဒါန်း ခဲ့ တဲ့ စ မိုင်း လ်
Next PostNext သရုပ်ဆောင်နေတိုးကို သူ့လူမျိုး ရခိုင်မလေးက ဒဲ့ပြောပြီ (ရုပ်သံ)